ဘိုးအင်း B737-823 အဆင့်မြင့် VC ကို DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
ဘိုးအင်း B737-823 အဆင့်မြင့် VC ကို FSX & P3D
အရွယ် 59.9 ကို MB
downloads ရယူရန္ 173 593
Project မှ OpenSky, Alejandro Rojas Lucenda, FSRepaintsGER အာဒံ Murphy, Rikoooo အားဖြင့်မွမ်းမံမှုများ
07 /3/ 2018 အပေါ် Updated: အတူအခုတော့ 100% သဟဇာတ Prepar3D v4 +, Honeywell FMC ဆက်ပြောသည်က virtual cockpit (ပန်းရောင်အယ်လ်အီးဒီ) တွင်အသစ်ကထုံးစံအသံတိုးမြှင်ညဥ့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဆက်ပြောသည်, ပါးစပ်အချက်ပြနှင့်အတူယာကုပ်အမျိုးကို Larsen ရဲ့ V-မြန်နှုန်း gauge (V1, V2 နှင့် V3 ၏အလိုအလျောက်တွက်ချက်မှု) ကဆက်ပြောသည်တစ် GPWS ကဆက်ပြောသည်, ကဆက်ပြောသည် အသံနှင့် Pushback များအတွက် panel ကနေ, နိုးစက် "အဘယ်သူမျှမဆေးလိပ်သောက်" နှင့် "ထိုင်ခုံခါးပတ်" ကဆက်ပြောသည်။ အတော်ကြာအသေးစား bug တွေ Fixed ။
Alejandro Rojas Lucena (Alrot) ကပြင်ဆင်အဆင့်မြင့်ကို virtual ယာဉ်နှင့်အတူထိပ်တန်းဘိုးအင်း 737-800 ။ အဆိုပါ VC ကို update က default အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ် features အသစ်ကမ်းလှမ်း FSX တစ်မိုးရွာရွာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ (mouse ကို switch သည်ပေါ်မှာ right-click) အလုပ်လုပ်သော Wiper အပါအဝငျ။ LCD ကို, EICAS, PFD, MFT, Autobrake, ပြတင်းပေါက်များလေယာဉ်မှူး, အခန်းအလင်းအိမ်, လက်တွေ့ FMC စနစ်နီးကပ်သတိပေးချက် (GPWS), ပိုကောင်းတဲ့ညဥ့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖွင့်ဘို့အ switches ။ အဆိုပါမော်ဒယ်ဒါကပြည့်စုံတစ်စုံဖြစ်ပါသည် .. ထုံးစံစသည်တို့အသံက high-resolution ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ Dynamic Flex အတောင်ပံရှိပါတယ်!
ဒါ့အပြင် 14 မြင့်မြင့်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တစ်ဦး repaints ဂျာမန်အသင်းထံမှထုပ်ပိုးလည်းပါဝင်သည် FSRepaintsGER.
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း, NOKAIR, Rayanair, Tuifly D-AHFK '' Hannover 96 'Tuifly D-AHFZ' 'GlücksbringAir', Air ကိုဘာလင်ကို D-ABKJ, Air ကိုဘာလင်ကို D-ABKI '' ဟောင်းပန်းချီ winglets ', Air ကိုဘာလင်တူရကီ TC-IZC, XL လေကြောင်းလိုင်း ဂျာမဏီကို D-AXLD '' tuifly စတစ်ကာ ', XL လေကြောင်းလိုင်းဂျာမဏီကို D-ဝင်ရိုး' 'sunweb', XL လေကြောင်းလိုင်းဂျာမဏီကို D-ဝင်ရိုး (အဟောင်း), XL လေကြောင်းလိုင်းဂျာမဏီကို D-AXLI '' Öger Tours မှ ', XL လေကြောင်းလိုင်းဂျာမဏီကို D-AXLJ, XL လေကြောင်းလိုင်းဂျာမဏီ D-AXLF '' Schauinsland Reisen '' ။
Author: Project မှ OpenSky, Alejandro Rojas Lucenda, FSRepaintsGER အာဒံ Murphy, Rikoooo အားဖြင့်မွမ်းမံမှုများ
ဘိုးရင်း ၇၅၇-၂၀၀ Donald Trump FSX & P3D